Ngingathola i-halva enenkomba ye-cholesterol ephezulu? > Ukudla ngesifo sikashukela
IHalva ingukudla okumnandi kwasasazeka emhlabeni wonke.
Le dessert ilungiselelwe ngokuya ngale ndlela:
Isiraphu yezinyosi iyalungiswa
Emva kwalokho, iyaxhuma futhi igoqise,
Okulandelayo, imbewu noma amantongomane, ngaphambili athosiwe, afakwa ku-caramel.
Ngokuvamile i-halva yenziwa nge:
Ukunikeza ukunambitheka komuntu ngamunye ku-halva engeza ekwenziweni kwe:
Izithelo ezifakiwe nezithelo ezomisiwe
I-Pistachio ne-almond nuts.
I-halva kusuka enhlanyelweni yelanga 11.60 amagremu 29.70 amagremu Amagremu angama-54.0 529 kcal
Imininingwane inikezwa ngokubalwa kwama-100.0 amagremu womkhiqizo.
Futhi, i-halva yanoma yikuphi ukuhlukahluka kusuka kwimbewu noma amantongomane aqukethe i-analog ye-phytosterol isitshalo se-cholesterol, esisusa ama-molecule wezilwane kusuka ekubunjweni kwegazi le-plasma, elisiza ukwehlisa inkomba ye-cholesterol.
Ochwepheshe bathi umphumela wokwehlisa i-cholesterol ngokusebenzisa i-halva ekudleni kanye nemininingwane yokwakheka kwalesi dessert, ngoba i-halva ine-phytosterol - i-analogue yesitshalo ye-cholesterol.
IHalva ifaka nama-vithamini anjalo:
Vitamin B1, evusa amangqamuzana obuchopho futhi isebenze intelligence. I-B1 iphinde ibuyise inkumbulo futhi ithinte kahle amaseli we-myocardial, ibuyise ukuzimela kwayo,
IVitamin B3 ibuyisela umthamo we-lipid emzimbeni, esiza ukunciphisa ama-lipid ngesilinganiso esiphansi samangqamuzana egazi nokuthuthukiswa kwe-systemic atherosulinosis enenkomba ye-cholesterol ephezulu,
Vitamin B9 ihlotshaniswa nokwakheka kwe-hemoglobin ohlelweni lwe-hematopoietic lwama-corpuscle abomvu. Ukuntuleka kwale ngxenye emzimbeni kuholela ku-anemia, ngakho-ke, ukusetshenziswa kwe-halva ukuvimbela i-anemia kanye ne-systemic atherosulinosis,
IVitamin E yehlisa ijubane inqubo yokuguga ezingeni lamaselula, futhi futhi ithuthukisa ijubane lokugeleza kwegazi ohlelweni, futhi ivimbele ukwakheka kwezigaba zegazi emithanjeni yemithambo yegazi, okuba ukuvimbela kwe-thrombosis futhi ikhuphuke i-cholesterol. IVitamin E isebenzisa umsebenzi wokuzala kwabesifazane,
IVithamini A ithuthukisa umbono futhi ithuthukisa nomsebenzi wobuchopho.
Izimbiwa eziyinhloko ekwakhekeni kwe-halva kusuka ezinhlamvini zejongilanga:
I-potassium ekwakhiweni kwembewu ithuthukisa ukwakheka nokusebenza kwe-myocardium ye-cardiac, futhi kusiza nomzimba ukuthola izingqimba ze-cholesterol emithanjeni,
Ama-molecule we-Magnesium alawula ukulinganisela kwamamolekyuli we-cholesterol emzimbeni, futhi asize ukukhulisa ingxenyana ye-cholesterol enhle, ngokunciphisa izingxenyana ze-lipids eziyingozi, futhi kuthinta kahle imicu yemisipha kanye ne-nerve,
UPhosphorus wenza kusebenze umsebenzi wamaseli obuchopho,
IHalva iqukethe nama-acid amaningi we-polyunsaturated acid, ayingxenye ye-Omega-3:
I-Linolenic PNA acid.
Ngosizo lwe-Omega-3 ne-phytosterol, i-halva iyakwazi ukulungisa ukungalingani kwe-lipid futhi ibekezelele i-cholesterol ephezulu.
Ngokuya ngezakhiwo zalo eziwusizo, ubumnandi bendabuko buhlukaniswe:
Inzuzo ephezulu ye-tahini (sesame) halva,
Indawo yesibili ithathwa ubumnandi benyosi yamantongomane,
I-halva ye-sunva iwona awusizo kakhulu, kepha ivame ukwenziwa futhi ithengwe abaningi.
IHalva imnandi futhi inempilo
Yimaphi amaswidi angenakudliwa ngenkomba ye-cholesterol ephezulu?
Amaswidi ekwakhiweni kwemikhiqizo enamafutha ezilwane noma amafutha asetshenziswayo angangezelela i-cholesterol ibe ngamazinga aphezulu:
Usawoti no-ukhilimu onokuqukethwe kwamafutha okungaphezulu kuka-10,0%,
Ukwakhiwa kwamafutha koshizi we-cottage,
Amafutha esundu nawukhukhunathi,
Ukudla okunqatshiwe okumnandi ngenkomba ye-cholesterol ephezulu kufaka phakathi:
Umkhiqizi wezimboni wamabhisikidi, amakhukhi we-gingerbread cookies namakhukhi nge imajarini namaqanda,
Amakhekhe namakhekhe anokhilimu we-Culinary, afaka ukhilimu kanye nebhotela lenkomo,
I-ayisikhilimu nobisi lwe-ayisikhilimu, kanye nama-mousses obisi,
Amaswidi aqukethe izingxenye zesundu noma kakhukhunathi kanye nezinto zobisi.
Amaswidi ongadli kuwo ngenkomba ye-cholesterol ephezulu
Ingabe kungenzeka ukuthi ama-halva abe ne-cholesterol ephezulu?
IHalva, yize ingumkhiqizo omnandi kahle, kepha ukusetshenziswa ngokulinganisela nangokufanele ekudleni, ayikwazi ukuthinta kakhulu ukulingana kwe-lipid futhi ikhulise inkomba ye-cholesterol, ngoba iqukethe izingxenye zezitshalo kuphela.
Ngaphezu kwe-halva enenkomba ye-cholesterol ephezulu, ungadla ukudla okunoshukela okunjalo:
Ushokoledi obabayo obumnyama obungu-50.0% nokuqukethwe okuphezulu kwe cocoa.
Kulesi chocolate ehlukahlukene kunenani elanele lama-antioxidants atholwe ezitshalweni avimbela ukwanda kwenkomba ye-cholesterol kanye nokuthuthukiswa kwe-systemic atherosclerosis.
Kuyavunyelwa ukusebenzisa ushokoledi omhlophe nobisi onama-lipid aphakeme ekudleni, ngoba lezi zinhlobonhlobo zinezilwane namafutha we-trans. Ungapheka futhi cocoa ngaphandle kokufaka ukhilimu nobisi.
Lesi siphuzo sithambisa umzimba kahle futhi sehlisa ukwanda kwe-lipid.
Ukwakheka kwale maswidi kuqukethe izithelo noma amajikijolo kanye ne-pectin, noma i-agar-agar, njenge-thickener. Isisekelo sonke se-marmalade sinezakhi zezitshalo, ngakho-ke ayinayo i-cholesterol ekwakhiweni kwayo.
Uma ama-marmalade enziwe nge-gelatin, khona-ke enenkomba ye-cholesterol ephezulu kakhulu, awukwazi ukuyidla, ngoba kune-cholesterol kwi-gelatin, yize kunjalo ngamanani amancane.
Kungcono ukupheka ngokwakho nge-marmalade, bese ufaka i-agar-agar esikhundleni se-gelatin kuyo, noju no-stevia esikhundleni sikashukela.
futhi ubumnandi obususelwa kusisekelo obususelwa ku-pectin noma i-agar-agar, obunganciphisa inkomba ye-cholesterol ku-plasma futhi babuyisele ibhalidi ye-lipid.
Isisekelo se-marshmallows yi-apula puree, equkethe i-pectin eningi. Futhi, ukwakheka kwama-marshmallows kuqukethe inani elikhulu lama-molecule e-iron ne-phosphorus, alwa ngempumelelo nazo zonke izinhlobo ze-anemia futhi akwazi ukukhulisa ukwakheka komzimba wamamolekyuli we-hemoglobin.
I-Pectin ibuyisela umgudu wokugaya ukudla, iqinisa follicles zezinwele namapuleti ezipikili.
I-Pectin ingu-100.0% okwazi ukubuyisa ukuphazamiseka ohlelweni olusezingeni eliphezulu. Ama-marshmallows azilungiselele avela kwizithako zemvelo azuzisa kakhulu nge-cholesterol ephezulu kunaleyo eyenziwe ngenkuthalo.
Izinto eziwusizo ze-Cholesterol
Ungasebenzisa futhi ngesibindi ama-lipid aphezulu ngamaswidi wemvelo asemuva:
Izithelo namajikijolo ane-agar agar,
Amaswidi wokujabulisa amaTurkey,
Ama-sorbets avela kuzo zonke izinhlobo zamantongomane nama-alimondi,
Izithelo ezomisiwe namaswidi we cocoa.
Amakhandlela obisi lwe-Caramel 3.70 amagremu 10,20 amagremu 73.1 amagremu 399
IMashmallows 0.8 0 78.3 316
U-Iris 3.3 7.5 81.8 407
Caramel 0 0.1 77.7 311
I-Chocolate Grade Pipi 3 20 67 460
I-Marmalade 0 0.1 77.7 311
Uju lwezemvelo 0.8 0 80.3 324
I-Pastille 0.5 0 80.4 323
Ushukela omhlophe 0 0 99.9 399
Tahini Halva 12.7 29.9 50.6 522
Ubisi Chocolate 6.9 37.7 52.4 558
Ushokoledi omnyama 5.4 35.3 52.6 549
Lapho ungakwazi ukudla i-halva?
Awukwazi ukusebenzisa i-halva phambi kwama-pathologies anjalo ahambisana ne-cholesterol ephezulu:
Isifo sikashukela se-pathology sikashukela zombili lezi zinhlobo. Nge-hyperglycemia, ukukhawulelwa okuqinile kokudla okumnandi kuyadingeka, noma ngabe banezinto zezitshalo noma zezilwane ekwakhekeni kwabo,
I-Pathology yamaseli wesibindi. Uma kunokuphulwa ekusebenzeni kwamaseli wesibindi, kuzodingeka futhi ukhawule ngokuqinile ukusetshenziswa kwamaswidi,
I-Pathology ukukhuluphala kuzo zonke izigaba.
Ngokuvamile i-halva kaningi ingaba yi-allergen kwiziguli ezikugomela ukudla.
Ngakho-ke, abantu abane-allergies kudingeka basebenzise lobu bumnandi ngokucophelela, ngoba ukungahambi kahle kwamantongomane kungavusa i-edema ye-Quincke ne-anaphylactic.
Abantu abane-allergies kudingeka basebenzise lobu bumnandi ngokucophelela.
Uma okuqukethwe ama-molecule we-magnesium emzimbeni kuncipha, khona-ke umuntu uzizwa unesifiso esinamandla sokudla i-halva. Ngemuva kokudla inani elincane lalomkhiqizo, ukuqoqwa kwe-magnesium kuyinto ejwayelekile.
Nge-index cholesterol ekhulayo, asikho isidingo esithile somzimba sokudla amaswidi, kufaka phakathi i-halva.
Odokotela abaningi bathambekele ekukholweni ukuthi i-halva ene-lipid ukungalingani kufanele ifakwe kwimenyu yokudla kwe-hypocholesterol, ngoba ayigcini nje ngokwandisa i-cholesterol, kodwa futhi iphansi ne-low metabolism density lipids.
Imithetho eyisisekelo yokusetshenziswa kwe-halva ekudleni enama-lipid ibhalansi:
Lokhu ubumnandi kufanele kudliwe ekuseni, noma kwenziwe isidlo sasemini,
Ungaphuzi i-halva ngetiye noma iziphuzo ezimnandi, iziphuzo ezinekhabhoni zihlanekezelwa ikakhulukazi. Ungadla i-halva ngaphandle kwesinqolo esimnandi sama-rose okhalweni,
Landela ukudla okune-khalori ephansi usuku lonke,
Kwenqatshelwe ukudla i-halva ngesidlo sakusihlwa noma ngesikhathi sokulala, ngoba kuvusa ukwanda kwama-lipids futhi kukhuphula isisindo somzimba,
I-halva kufanele idliwe ngemithamo elinganiselwe ukusuka kumagremu angama-50.0 kuye ku-100.0 amagremu ngokukhonza ngakunye, hhayi ngaphezulu kwezikhathi ezi-2 ngesonto,
Ukusetshenziswa ngokweqile kwamaswidi asempumalanga kucasule i-pathology yokukhuluphala kanye nohlobo 2 sikashukela.
Usongo lwe-cholesterol ephezulu
I-cholesterol ijwayele ukubizwa ngokuthi ngumbulali othuleyo, ngoba ukwanda kokugcwala kwayo emzimbeni akuzivezi nganoma iyiphi indlela futhi icishe ayithinti inhlala-kahle yesiguli. Kungenzeka ukuthola inkomba ephezulu yento kuphela ngokudlula ekuhlolweni kwegazi kusuka emthanjeni. Okujwayelekile ngu-6 mmol / L.
Ukusetshenziswa kwezindlela zokudla ezenzelwe umuntu ngamunye empilweni kwenza ukuthi kwehle i-cholesterol nge-10%. Ukuthola lo mphumela, asikho isidingo sokusebenzisa umuthi okhethekile onemiphumela emibi eminingi. Kuyiqiniso, akunangqondo ukuthola i-cholesterol iyithola ngokuphelele ngokudla, ngoba itholakala cishe kuwo wonke umkhiqizo wemvelaphi yezilwane. Ngesikhathi esifanayo, i-cholesterol iyinto ephikisanayo futhi, ngaphezu kokulimaza, iletha izinzuzo ezinkulu emzimbeni.
Ukuqonda i-cholesterol yakho kubaluleke kakhulu. Uma umzimba usuqalile inqubo yokwakha ama-atherosulinotic, khona-ke ngemuva kwesikhashana bayoba yisici ekunciphiseni kwephaseji yemithambo nokuqhekeka kwayo. Lokhu kubonakaliswa kusebenza njengendawo enhle yokwakheka kweziqeshana zegazi, okuthi uma kuqhekeka kuholele emiphumeleni elandelayo:
Ngokubheka ukudla okune-cholesterol ephezulu, unganciphisa ukugcwaliswa kwayo. Ukudla okunjalo kufanele kungashintshi. Isisekelo salokhu kudla ukwenqatshwa kwaleyo mikhiqizo ehlanziwe kahle, futhi kubalulekile futhi ukuthi ungadli ukudla okulula. Kaningi, ukudla ukudla okumnandi nakho kwenqatshelwe.
Ubumnandi baseMpumalanga nezakhi zalo
Namuhla, i-halva ibhekwa njengobumnandi obuthandekayo bemisiko yasempumalanga. Izindawo zokubala zigcwele i-assortment enkulu yezinambatho ezahlukene kanye nama-shades. IHalva iyenzeka:
ngokufakwa kukashokholethi, amantongomane, ama-apricots omisiwe, izithelo ezinwetshiwe.
Kungasiphi isizathu abantu abaningi bafuna kakhulu ukudla okungenani umkhiqizo omncane? Kungaba njengokulandelayo:
Yehlisa ushukela ohlelweni lokujikeleza.
Imvamisa ngenxa yokuntuleka kwe-magnesium.
Ukuqina kwegazi eliphakeme.
I-halva yamanje iqukethe:
Imvamisa, ukwenza ngcono ukunambitheka kwamaswidi, umenzi wehlisa kuphela izinzuzo zakhe ngokungeza izingxenye ezingafuneki zokwenziwa.
Lapho ubumnandi bulungiswa ngokwezindlela zokupheka zakudala ezivela kumantongomane ahlukahlukene nembewu, kufakwa kuwo i-caramel molasses noju.
IHalva isho umkhiqizo onekhalori ephezulu ekwakhiweni futhi ikhuthaza ukugcwala ngokushesha. Inama-carbohydrate amaningi. Ngenxa yembewu ye-sunflower, futhi kunamafutha amaningi ku-delicacy. Futhi umkhiqizo uqukethe:
acid acid anenzuzo futhi adingekayo umzimba,
Umkhiqizo futhi unengxube yama-tocopherols. Ukuba ne-Vitamin E kudonsa isikhathi eside eshalofini layo futhi kuvikela umzimba esenzakalweni sobuthi, i-lactic acid.
Uma kukhona i-cholesterol ephezulu, i-halva ivunyelwe, ngeke ilimaze. Ngaphezu kwalokho, iqukethe amavithamini amaningi nama-macronutrients. Noma kunjalo, lapho uthenga umkhiqizo, ungakhohlwa ukuthi kubhekwa njengekhalori ephezulu.
Izinzuzo kanye nokulimala komkhiqizo omnandi
Lo mkhiqizo ulusizo impela, ngokunambitheka okungajwayelekile. Imunca kahle umzimba. Ngenxa yokuqukethwe kwayo okunamafutha amaningi, ubumnandi bukhanya futhi bunempilo ngesikhathi esisodwa.
Ukuba nomqondo wezinzuzo nokulimala kwe-halva, ungazakhela ngokwakho amandla ukudla, ujabulele ukunambitheka kwawo.
Izici eziwusizo zamaswidi:
Ngenxa yezakhiwo zemvelo ze-antiseptic zezimbewu zikabhekilanga, umzimba uyakwazi ukuzikhulula kumakhompiyutha nobuthi.
Ama-asidi we-polyunsaturated atholakala enhlanyelweni avimbela inqubo yokuguga.
Isitshalo samaphrotheni sithanda ukuvumelaniswa kwemetabolism futhi sivuselela amaseli.
I-Caramel, ecebile ku-folic acid, inesibopho sokwenza amaseli kahle.
IHalva isiza ukuqinisa umzimba, iguqule ukusebenza kwamasistimu wezinzwa nokujikeleza, izitho zokugaya ukudla, kanye nokwehlisa i-cholesterol.
Ubumnandi bunconywa kwabesifazane abakhulelwe nababambisayo.
I-dessert isetshenziswa njengokuvimbela i-anemia.
Umkhiqizo uthinta kahle imood, ususa isimo sokudangala.
Umkhiqizo uphambaniswe nezifo ezinjalo ezikhona:
Ukwelapha akunakudliwa lapho kukhona i-gastritis, ngoba kungaholela ekwandeni. Endabeni yesigaba esibi kakhulu se-pancreatitis, i-halva iyakwazi ukuvusa inqubo yokuvuvukala yamanyikwe, ukuqaqamba, isicanucanu, isisu, nokuhlanza.
Uma isiguli sinesifo sikashukela, ushukela ungathathelwa indawo nge-halva, equkethe i-fructose, evunyelwe kwabanesifo sikashukela.
Ayikho imikhawulo yomuntu ophilile ngokuphelele. Kodwa-ke, ngokwazi okuqukethwe okuphezulu kwekhalori komkhiqizo, odokotela balulekisa ukungathathi amagremu angama-35 ngosuku. Kumagremu ayi-100 amaswidi, kune-510 - 590 kilocalories.
Ingabe kukhona ukuxhumana phakathi kwe-dessert ne-cholesterol?
I-dessert yasendulo yasempumalanga inenombolo enkulu yabantu abathandayo, futhi, ngokweqiniso, kukhona labo abanesifiso sokudla i-halva nge-cholesterol ephezulu. Ingabe kukhona ukuxhumana phakathi kwe-halva ne-cholesterol? Izazi zezempilo zithi i-dessert ayiphephile kuphela ngesilinganiso esithe xaxa, futhi iholela ekunciphiseni kokugcwala kwe-cholesterol yegazi.
Njengengxenye ye-halva, i-phytosterol ikhona - isitshalo esifana ne-cholesterol. Ukungena ngaphakathi, le nto ayihlali ezindongeni futhi ayiholeli ekwakhekeni kwama-plaque, kodwa, kunalokho, ikhulula amaseli ku-cholesterol esezingeni eliphansi.
Kukhona iqiniso lokuthi umzimba ukhiqiza ingxenyana ehlukile ye-cholesterol ngokwayo, futhi inqwaba yomzimba inomthelela ekwenzeni izinto ezisezingeni eliphansi. Uma sibheka lo mbono, singaphetha ngokuthi ama-halva anethonya elingaqondile ekwenyuseni izinga. Kukho konke okudingayo ukwazi isilinganiso.
Lapho kukhona ngisho ne-cholesterol ephezulu, isiguli singesabi ukudla amaswidi. Into esemqoka ukuba nomqondo wokuthi kungakanani futhi kungakanani.
Iresiphi yasekuqaleni imelelwa yizakhi ezintathu eziyinhloko:
Isisindo samaphrotheni. Ilungiselelwe ngesisekelo sohlobo oluthile lwamantongomane noma imbewu, ngokubhula okugazingiwe nangokugunda izikhwebu zezithelo ezinjengokuthi:
Umenzeli we-Foamer. Yenza ukuvumelana kwama-halva kuhlukaniswe. Kungasuselwa emhlophe qanda, kepha kaningi kukhiqizwa kusuka ezimpandeni zezitshalo ezinjengalezi:
Isiraphu kashukela noma uju. I-pre-hit in foam kanye ne-caramelized.
Ukunambitheka kwamaswidi kuthuthukiswa ngokufakwa kwezithelo ezomisiwe, ukhukhunathi, izithelo ezinophisi, i-vanilla, i-pistachios. IHalva enezithako zemvelo ayinayo i-cholesterol.
Izinto eziqukethwe yi-halva ye-sunva, nemiphumela yazo emzimbeni:
Iprotheni yemifino. Isiza ukuvuselelwa kweseli.
Tocopherol. I-metabolism ejwayelekile, inciphisa inqubo yokuguga, isekela umsebenzi wokuzala.
Amaminerali Potassium neMagnesium. Ngokubambisana namavithamini A, B, D kuthuthukisa ukuhamba kwegazi nokusebenza kohlelo lwezinzwa.
Ama-Linoleic nama-linolenic fatty acids. Vimbela ukwenzeka kwe-atherossteosis, yehlise ijubane ukuguga ezingeni lamaselula.
I-fiber yokudla. I-Normalize ukugaya kanye nezinqubo ze-metabolic.
Amafutha emifino. Khuthaza ukuthathwa kalula kwamaswidi.
Ama-carbohydrate. Benza umkhiqizo ube nekhalori ephezulu futhi wanelise, okuvumela ukuthi usetshenziswe kahle, ngokwesibonelo, emadodeni anenhloso yokululama ngokushesha ekuzikhandlekeni komzimba isikhathi eside.
I-Folic acid. Ithanda ukuthuthukiswa kwamaseli omzimba, enye yamavithamini adingeka kakhulu kwabesifazane abakhulelwe.
Pectin Isusa izinto ezilimazayo namafutha.
Ezinye izakhiwo eziwusizo:
Ukusetshenziswa kwama-goodies anjalo kuzothuthukisa imizwa yomuntu.
Inomphumela we-antiseptic, umelana namagciwane kanye nobuthi.
I-endorphin ye-hormone iyasiza, ngakho-ke kunconywa ukuthuthukisa ukuguquguquka kwemizwa, ukwelapha nokuvikela ukucindezela.
Odokotela bacebisa ukusetshenziswa kwe-halva njalo ezinganeni ezine-hemoglobin ephansi.
Isiza abesifazane abakhulelwe ngokuqunjelwa, njengoba ubumnandi bunomphumela omnene we-laxative.
Uma ufuna i-halva ngempela, khona-ke lokhu kungabonisa ukuba khona kwama-pathologies anjengalawa:
ukuntuleka emzimbeni we-magnesium.
Ngingakwazi ukudla nge-cholesterol ephezulu?
E-halva kukhona i-analog yezitshalo ze-cholesterol - phytosterols. Into, ebonakala egazini, ithuthukisa ukwakheka kwayo, ayinqwabeki ezindongeni zemithambo yegazi, kodwa, kunalokho, uyihlanze ngezigcawu ze-atherosclerotic. Ngaphezu kwalokho, ama-acid amaningi we-polyunsaturated asiza ukuthuthukisa ukuhamba kwegazi, okulungele ukulwa ne-atherossteosis. Izazi zezempilo zeluleka ukudla i-halva nge-cholesterol ephezulu, ngoba ayisiyingozi nje kuphela, kodwa futhi yehlisa izinga layo. Amaswidi ekhalori aphezulu ahambisana nokusetshenziswa okungalawulwa kudala ukwanda kwesisindo somzimba. Ukhuluphele, nakho, kunomthelela ekukhuleni kwama-cholesterol amana. Ngakho-ke, kubalulekile ukubheka isilinganiso futhi ungadli ngokweqile.
Isazi sezempilo esidumile uDavid Perlmutter ukholelwa ukuthi i-sesame halva, uphizi kanye nojongilanga kusebenza kakhulu kwi-atherossteosis.
Ngubani okungafanele adle?
IHalva icutshwe ku-pathologies elandelayo:
Ukudla okumnandi okunjalo akuvunyelwe ukusetshenziswa ngabantu abahlushwa i-gastritis.
iguliswa izingxenye zomkhiqizo.
Ukunganaki imikhawulo yokwamukelwa kungadala ukuboniswa okungajabulisi njengoku:
izinhlungu, isicanucanu, ukugabha, ukukhubazeka kwamathumbu nge-pancreatitis,
gxuma ushukela kwabashukela.
Ukusetshenziswa ngokweqile futhi njalo kwe-halva kuvusa ukwanda kwesisindo somzimba. Izazi zezempilo zincoma ukungadli amaswidi angaphezu kwama-35 g ngosuku. Izakhi eziyinhloko zomkhiqizo - amantongomane noju - kungadala ukungezwani komzimba okukhulu. Ukusabela kubonakalisa ngesimo sokubomvu, ukuqubuka, ukudwengula, ukuvuvukala kwezicubu ze-mucous, ukuthuthukiswa kokuqhaqhazeka kwe-anaphylactic akubeki eceleni. Lapho uthenga i-halva, kubalulekile ukutadisha ukwakheka kwayo ngokuba khona kwe-allergener, futhi ukuthola umkhiqizo ngaphandle kodayi, izithambisi zokunambitheka, noma amakha. Izinto ezilimazayo ekwakhiweni kunciphisa izinzuzo ezingenzeka zokudla kokudla.
Izimvume ezivunyelwe futhi ezivinjelwe
Iseluleko odokotela sokuthi banciphise amaswidi nge-cholesterol ephezulu, kusobala, sinembile, kepha lokhu akusho ukuthi ngokuphelele konke kudinga ukukhishwa. Iqiniso ngukuthi ushukela awuthinti izinga le-cholesterol embi. Inkomba inyuka ngokusetshenziswa kwamafutha ezilwane, yimali yazo okumele incishiswe. Ngakho-ke, uma ukhetha i-dessert ngokunembe, ngeke kube khona ingozi.
Okokuqala, udinga ukukhumbula ukuthi yikuphi ukudla ongakwazi ukukudla. Ngakho-ke, kufanele ulahle amakhekhe namakhekhe, ubisi oluqukethwe kuzo lukhulisa i-cholesterol embi. Kungashiwo okufanayo ngamaswidi noshokolethi obisi. Zonke izitsha ezinamaqanda, ibhotela, imajarini, ukhilimu noma ukhilimu omuncu azihlanganisiwe.
Umuntu ophethe i-cholesterol ephezulu kufanele agweme amaswidi afana nalawa:
amakhekhe ekhilimu namakhekhe,
amaswidi (ushokoledi nobisi).
Kodwa-ke, kunama-dessert ongawadla ngokuphephile ngisho ne-cholesterol ephezulu. Njengomthetho, lawa maswidi anesisekelo sezithelo, kepha noma imiphi imikhiqizo yemifino ingasetshenziswa.
Ushokoledi obabayo omnyama wenziwa kusuka ku-cocoa. Kwenziwa ngaphandle kokufaka amafutha ezilwane, ngakho ubumnandi bungadliwa ngabantu abane-cholesterol ephezulu. Ngaphezu kwalokho, ushokoledi omnyama uqukethe inani elikhulu lama-antioxidants futhi usiza ekunciphiseni igazi. Ukusetshenziswa okulinganiselwe koshokoledi omnyama kuzozuzisa noma yimuphi umuntu.
AmaMarshmallows alungiswa ngesisekelo sezithelo noshukela, bese umbala omhlophe utholakala ngenxa yokushaywa ngemishini okwenziwe okuphelele. Ngokuphikisana nenkolelo ethandwayo, alikho iqanda, ubisi, noma ukhilimu kulo mkhiqizo. Kungashiwo okufanayo nge-marmalade, eyenziwe ngesisekelo sesiraphu yezithelo.
I-pastille yenziwe ngoshukela, izithelo kanye ne-thickener. Le dessert kulula ukuyenza ngokwakho. Intokozo yaseTurkey ingxube yama-molasses ne-starch, okwenza kube yi-dessert ekahle yabantu abane-cholesterol ephezulu.
E-halva, naphezu kokuqukethwe kwayo okukhulu kwekhalori, azikho namafutha ezilwane. IHalva ene-cholesterol ephezulu iyasiza futhi. Ngenxa yokugcotshwa kwamavithamini, amaminerali nokuqukethwe kwezinto ezikhethekile, ama-phytosterols, lo mkhiqizo wehlisa izinga le-cholesterol embi.
IHalva - okumnandi futhi inempilo
Le ngenye yamaswidi asendulo. Ukwenza i-halva, udinga isiraphu, mhlawumbe uju, kanye nembewu ethosiwe. Isiraphu idinga ukushaywa ngesiswebhu bese yenziwe i-caramelized, bese ihlanganiswa nembewu ye-sunflower. Kuthandiwe amantongomane, amantongomane, izithelo ezomisiwe, cocoa noma izithelo eziqoshiwe. IHalva ingalungiswa hhayi kuphela kusuka elangeni. Imbewu ejwayelekile ingashintshwa imbewu ye-sesame.
IHalva ene-cholesterol inomphumela omuhle ngenxa yokuqukethwe kwama-phytosterols kuyo. Kuyi-analogue esekwe ezitshalweni ye-cholesterol ekhiqizwa emzimbeni womuntu. Uma ingena egazini, ithatha isikhundla se-cholesterol embi. Ngasikhathi sinye, ama-phytosterols akahlali ezindongeni zemithambo yegazi, evimbela ukwakheka kwama-plaque.
Njengoba sekushiwo, i-halva inezinto eziningi ezilusizo. Ngakho-ke, kumkhiqizo ovela ezinhlangeni ze-sunflower, uqukethe amavithamini A, E, D neqembu B, kanye ne-magnesium ne-potassium.
I-Sesame halva, evame emazweni asempumalanga, iqukethe amavithamini A, E, C, F kanye neqembu B. Lo mkhiqizo ugcwele zinc, manganese ne-potassium. Kulula ukuthola lokhu okumnandi, kuthengwa izitolo ezinkulu zamaketanga.
I-almond delicacy kunzima kakhulu ukuyithola, ngaphezu kwalokho, le halva ine-flavour ethile ebabayo futhi hhayi wonke umuntu oyithandayo. Kepha lokhu akwenzi umkhiqizo ube lusizo olungaphansi. I-almond halva iqukethe i-phosphorus, i-calcium ne-vithamini D.
IHalva inomphumela onenzuzo emgudwini wokugaya ukudla, yenza uhlelo olujwayelekile lokuzala futhi lusize ekulweni ne-atherossteosis. Kodwa-ke, ungakhohlwa ngokuqukethwe kwayo okukhulu kwekhalori, ukusetshenziswa ngokweqile komkhiqizo kungadala ukukhuluphala.
Odokotela bathi kunobudlelwano obuqondile phakathi kwe-cholesterol nenani lamafutha emzimbeni womuntu. Ukukhuluphala ngokweqile kunomthelela ekukhiqizweni okwandayo kwento elimazayo. Ngakho-ke, iziguli ezine-cholesterol ephezulu zidinga ukuqapha isisindo sazo futhi zingazibandakanyi namaswidi, ikakhulukazi njenge-halva.
IHalvah yenziwe ngezithako ezintathu eziyinhloko: ukunamathisela i-oyela yembewu noma amantongomane (isisindo samaprotheni), isigaxa se-caramel kusuka ushukela kanye nama-molasses noma uju (okuvame ukusetshenziselwa izindlela zokupheka zasekhaya), i-ejenti ye-foam (izimpande ze-licorice, i-marshmallow noma i-egg emhlophe). Kwesinye isikhathi kufakwa ezinye izakhi ekunambithekeni komkhiqizo, kudayi: i-vanilla, i-cocoa powder, i-pistachios, i-vanilla.
I-Sesame (tahini) - isisindo samaprotheni senziwa kusuka enhlanyelweni yesesame yomhlaba. Kuqukethe amavithamini A, C, E, B, ukulandelela izinto (i-calcium, i-zinc, i-magnesium).
I-sunflower - inqwaba yamaprotheni ilungiswa kusuka emhlabathini imbewu ye-sunflower enamafutha. Uma iqhathaniswa ne-sesame, inombala omnyama kakhulu. Kuqukethe amavithamini A, D, E, B, potassium, magnesium.
I-peanut - yenziwe ngokufana ne-sesame ne-sunflower, kepha kusuka kumantongomane achobozekile. Ucebile phosphorus, calcium, uvithamini D.
I-Walnut - noma yiluphi uhlobo lwamantongomane noma ingxube yabo lungasetshenziselwa isisekelo. Emashalofini ezitolo ungathola i-almond noma i-pistachio halva, kepha lokhu kuyatholakala futhi kuyindawo yokudlela ebizayo.
IHalva ingumkhiqizo omnandi kakhulu, inokuqukethwe kwekhalori okuphezulu okungama-500-700 kcal / 100 g.
Kungenzeka yini ukuthi udle i-halva ene-hypercholesterolemia
Odokotela bakukhuthaza ukuthi unciphise ukusebenzisa kwakho amaswidi nge-cholesterol ephezulu. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi udinga ukulahla ngokuphelele amaswidi.
Khawula isidingo sokudla okumnandi okuqukethe amaqanda, ukhilimu, ibhotela, imajarini:
IHalva ayisebenzi kumikhiqizo enqatshelwe. Ingadliwa nge-cholesterol ephezulu ku-20-30 g / ngosuku, izikhathi ezi-2-3 / isonto.
Ukusetshenziswa kwe-halva kuzodingeka kungafakwa kumacala alandelayo:
Isifo sikashukela mellitus. Ungasebenzisa izinhlobo zokudla kuphela lapho kusetshenziswa indawo ye-glucose.
I-pancreatitis, ukungasebenzi kahle kwesibindi, i-gastritis, isilonda sesisu. Okumnandi - ukudla okusindayo kwezitho ezingafezekisi ngokuphelele imisebenzi yazo eyisisekelo.
Ukukhuluphala ngokweqile, kulandela ukudla okune-khalori ephansi.
IHalva ayihlanganisiwe nenyama, ushizi, ubisi, ushokoledi. Ngomkhiqizo owenziwe ekhaya, ungangeza izithelo ezi-candied, izithelo ezomisiwe.
IHalva iyindlela ehlukile yokutshokoledi. Kepha udinga ukukhumbula ngokuqukethwe kwekhalori okuphezulu komkhiqizo futhi ungabi ngaphezu kwenani eliphakanyisiwe.
Ukwakheka, ukulimaza nokuhlomula
Ngenxa yokuthi i-halva yenziwa kuphela ngezakhi zezitshalo zemvelo, akwenzeki kuphela, kodwa futhi kuze kube nezinga elithile eliwusizo lokudla. Izakhi zalo eziphambili ziyizinhlayiya zamaprotheni kusuka ezinhlamvini zelanga
Ungesabi igama "lezimboni" lomenzeli ovunguzayo. Yenziwe ngezithako zemvelo ezinjenge-malt noma impande yesepha, imvamisa kakhulu emsukeni we-marshmallow noma ngeqanda elimhlophe, okuthi, yize uwumkhiqizo wesilwane, ungathinti i-cholesterol.
In kuya ngebanga UHalva yena unezimpawu eziwusizo.
Ama-halva ajwayelekile kakhulu kusuka ezinhlamvini ze-sunflower agcwele amavithamini A, D, E, ama-element K, Mg, kanye namavithamini e-B adingekayo emzimbeni, okufanayo kusebenza ezinhlotsheni zamantongomane.
Izinhlobo zembewu zesame zinothile ngamavithamini A, C, E, F, izakhi zeCa, Zn, Mg, amavithamini eqembu B.
Izinhlobonhlobo ze-alimondi ezingavamile kakhulu ziqukethe i-phosphorus, i-calcium ne-Vitamin D.
Ngaphezu kwalokho, i-halva iqukethe amafutha namaprotheni emvelaphi yezitshalo, acid acid, amavithamini kanye namaminerali, ngenxa yokuthi inenombolo izakhiwo eziwusizo.
Inomphumela we-antiseptic, ulwa namagciwane nobuthi.
Yehlisa ukuguga futhi ibuye yenze i-metabolism ibejwayelekile ngenxa yokuqukethwe kwayo okuphezulu kwe-Vitamin E.
Amaprotheni asuselwa ezitshalweni akhuthaza ukuvuselelwa kweseli.
Amafutha e-polyunsaturated fatty acids awusizo ukuvimbela ukukhula kwe-atherosclerosis, futhi futhi kuvimbela inqubo yokuguga kumaseli.
IHalva inconyelwa abesifazane abakhulelwe, ngoba inomphumela omncane we-laxative.
Odokotela balule izingane ezine-hemoglobin ephansi ukuba ziyisebenzise.
Umphumela onenzuzo emsebenzini wohlelo lokujikeleza nezinzwa, kanye nokugaya ukudla.
Ukusetshenziswa ejwayelekile kwalokhu okumnandi kwempumalanga kunconyelwa ukukhulisa isimo somoya, kanye nokwelashwa nokuvinjwa kokuxineka, ngoba kunomthelela ekukhiqizeni kwama-endorphin ngomzimba.
Yize i-halva ne-cholesterol kuhambelana ngokwanele, ukulimala kokudla umuthi omnandi okuqukethwe yi-khalori ephezulu nokuqukethwe ushukela omningi, okusho abantu wesaba ukukhuluphala noma vele unayo ngokweqile kufanelekile sebenzisa ngokuqapha lesi siphudingi.
Umphumela we-halva ku-cholesterol
Ngokusho kwabasebenza ngokudla okunempilo, ngisho nokuxineka okukhulu kwe-cholesterol egazini, i-halva ayenzeki kuphela, kodwa futhi iyadingeka. Lokhu kungenxa yokuqukethwe okukuyo. i-phytosterol - i-analogue yemvelo ye-cholesterol. Umehluko wawo kusuka ku-cholesterol yezilwane ukuthi ayiqongeli ezindongeni zemithambo yegazi, kodwa kunalokho inomthelela ekuzihlanzeni nasekuphuculeni ukwakheka kwegazi.
Okuqukethwe okukhulunyiwe okuphezulu esele kukhishwe kungaholela ekwandeni kwesisindo somzimba ngokusetshenziswa okungalawulwa kwe-halva. Futhi abantu abakhuluphele bavame ukukhulisa i-cholesterol. Kulokhu, singasho ukuthi ngokungaqondile le dessert ingabandakanyeka ekwandiseni i-cholesterol.